Featured – Page 3 – Hargeysa Cultural Centre
Sidee loo dheellitiri karaa golaha suugaanta ee dalka? Sidee ayaa se loo dhiirri gelin karaa hibooyinka aan la dhaadanayn ee dalka gobol walba jooga? Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa ayaa waxa ay bilowday in ay saamayn ku yeelato arrintan, waxna ka beddesho sida ay imika tahay. Habeenka “Caweyska Suugaanta” ayaa ah mid ay u siman yihiin dhammaan dhallinyarta uu Ilaahay hibada u siiyey tirinta suugaanta, lab iyo dheddig, gobol kasta oo ay joogaanba.
Deeqa Nuux Yoonis, Maxamed Galaydh, Ibraahim Xagar iyo Cabdiqani Mandela waa dhallinyar ka mid ah kuwa maanta ay tahay in la siiyo masrax ay suugaantooda ku soo bandhigaan, lagana faa’ideysto. Caweyskan waxa ay afartoodu ku soo bandhigeen, dadka 300 kor u dhaafay ee fadhiyana ay la wadaageen suugaan dhinacyo badan taabanaysa. Haddii ay noqoto wadaniyadda, toosinta jiilka ay ka midka yihiin iyo dhanka jacaylka, intaba.
Haweenka iyo Garsoorka
Daaddihiso: Nuural-huda Cali Banfas
Waxa in badan laga faalloodaa sida dhibbanayaasha dheddig aanay mararka qaar u soo bandhigan karin dacwaddooda maadaama ay raggu aad ugu badan yihiin goobaha garsoorka oo dhan. Laga yaabaa in ay qofka dumarka ahi ka xishooto in ay ka warranto faldambiyeed iyada ka dhan ah, amaba sababo kale awgood aanay ugu sheegan karin ragga. Taasi waa marka laga eego dhanka dhibbanaha. Dhanka kale ee dhallinyarta iyo in ay u sinnaadaan tacliinta dalka taalla, inantuna ay shaqo ku heli karto wixii ay soo baratay, iyada oo aan lagu faquuqay dheddignimadeeda.
Nasiibwanaag, taasi waa ay soo yaraanaysaa xilligan la joogo, walow ay hawl badani dhiman tahay. Haween badan ayaa ku jira ciidanka amaba dembibaadhayaal ah, tirade haweenka ee qareennada ahi waa ay soo kordhaysaa, qaarkoodna waxaba ay ka shaqeeyaan xafiiska xeerilaalinta.
Hibo waxa ay ka baxday jaamcadda sannadkii 2012, imikana waxa ay xeerilaaliye ahayd laga soo bilaabo 2014-kii. Farduus, sidoo kale 2012 ay waxbarashadeedii dhammaysay, maantana waa qareen. Xubinta saddexaad ee caweyskan goobjoogga ahayd waa Hoodo oo ah dembibaadhe.
Garsoorka Somaliland iyo dardargelinta in la kordhiyo tirada haweenku waxa ay saamayn yeelatay ka dib kulankii ay Wasaaradda Caddaaladdu soo agaasintay sannadkii 2008-dii. Shirkaasi waxa uu wax ka taray ka-qaybgalka haweenka ee nidaamka caddaalada ee dalka.
Daaddihiso: Farduus M Dheere
Barnaamijkani waxa uu daba socdaa ama uu ka mid yahay mawduuc taxane ah oo lagaga doodayo dhallinyarta iyo shaqala’aanta baahsan ee haysata. Weydiinta salka u ah dooddani waxa ay ahayd, “Ma shaqala’aan ayaa jirta mise shaqaysila’aan?”
Dad badan ayaa ku dooda in ay jirto hoosudhac ku yimid rabitaanka dadka ee ah in ay qabtaan shaqo aanay u arkayn in ay tahay tii ay qalbiga ku hayeen. Khasab miyaa in xafiis laga shaqeeyo, suurtagal se ma tahay in ay dhammaan sidaa la yeelo? Haddiiba aad hore u heli weydo shaqadii aad wax u soo baratay, ma jirtaa tababarro saa’id ah oo aad qaadan karto si aad xirfaddaada uga dhigto mid soo jiidata shaqabixiyaha?
Martida barnaamijkani waxa ay ahayd hay’adda Havoyoco oo ah hay’ad si dhow ula shaqaysa dhallinyarta, bixisana tababarro iyo waxbarashooyin xirfadeed oo qofka u sahla in uu si fudud shaqo u helo. Cabdillaahi Maxamuud Xasan oo ah maamula guud ee Havoyoco ee Somaliland ayaa ka hadlay barnaamijyada kala duwan ee ay u hayaan dhallinyarta, si ay suuqa shaqada hore ugu geli karaan. Waxa uu sheegay in ay muhiimadda siiyaan dadka aanu dhaqaalahoodu wanaagsanayn, hadhowna kuwooda dhibcaha sare keena ay u hayaan fursad ah in la deymiyo kharas raasamaal ah oo uu meherad ku furan karo.
Fu’aad Cabdillaahi oo ah Tababare Sare oo Dugsiga Farsamada Gacanta ee Havoyoco ah ayaa dadka uga warramay sida ay tababarradaasi qofka ugu fududayn karaan in ay shaqo helaan. Waxa kale oo uu sheegay in ay muhiim tahay in marka uu qofku shahaado jaamacadeed sito, uu qaadan karo tababar farsamada gacanta ah oo wax badan ka taraysa mustaqbalka qofka.
Cabdishakuur Cali Aar oo ah Madaxa Barnaamijyada Horumarinta Dhalliyarada ee Havoyoco ayaa sheegay in ay jirto jid kale oo uu qofku mari karo, jaamacadduna aanay ahayn mid ay qasab tahay in la wada maro.
Daaddihiso: Yaasmiin Maxamed Kaahin
Caweyskani waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu waaweyn ee ka dhacay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa intii ka dambeysay Carwada Buugaagta. Dadka ka soo qayb galay oo kor u dhaafay 800 oo qof ayaa diyaar u ahaa in ay dhegaystaan, muuqaalkoodana ka bogtaan afar abwaan oo ah kuwa ay dhallinyartu aad ugu xidhan tahay xilligan. Cabdiraxmaan Abees, Cabdiqaadir Qalinle, Xasan Dhuxul “Laabsaalax” iyo Cabdillaahi Xasan “Ganey” ayaa caweyskan suugaantooda qayb ka mid ah u soo xulay bulshada soo hor fadhiday iyo kuwa sida tooska ah hawada uga la socdayba.
Mawduucyadu waxa ay isugu jireen kuwo wacyi bulsheed ah iyo kuwo madadaalo ah, labadaba. Sidee loo dabar jaraa qabyaaladda iyo faquuqa noocyadiisa kala duwan? Sidee bulshadu ku noqon kartaa mid caafimaad qabta? Sidee se loo sixi karaa khaladaadka jira iyada oo aan la lumen waxa la wada leeyahay? Suugaantu miyay ka saamayn yartay tii qarnigii hore dabayaaqadiisii la tirin jirey? Haddii ay sidaas tahay, waa maxay sababtu? Waa weydiimo lagaga jawaabay tix iyo tiraab labadaba.
Daaddihiye: Khalid Maxamed Siciid
Ma qasab baa in aad cid u shaqayso, adiga oo adigu iskaa u shaqaysan kara? Inta badan, dadku waxa ay raadiyaan shaqo, shaqo dalkeenna aad u adag in la helo, iyada oo laga yaabo in qofkani uu si fudud isagu shaqo u abuuri kari lahaa. Si aad adigu shaqo u abuurto, dabcan waxa la rabaa in aad marka hore la timaaddo fikirkii, ka dibna fulintiisa. Dad badan oo dhallinyaro u badan ayaa laga yaabaa in ay hayaan fikirro waxku-ool ah, sidaas oo ay tahay, ma fuliyaan. Sababta dhowr waxyaabood ayaa lagu sheegaa. Midka ugu weynina waa in aanu qofku lahayn geesinnimadii uu ku fulin lahaa arrintaas. Haddaba si loo dhiirri geliyo dhallinyarta, waxa barnaamijkan marti ku ahaa Xasan Ibraahin oo lagu naanayso “Dhakajebiye”, ahna magaca shirkadda uu ka socdo iyo Khayre Ibraahin oo ah mulkiilaha shirkadda “Brandkii”.
Xasan waxa uu baadhitaan ku sameeyey shaaha magaalada lagu cabbo, waxaanu xaqiiqsaday in aanu suuqa ka heli karin shaaha guriga lagu sameeyo oo kale. Taasi waxa ay ku dhalisay in uu xambaarto falaas weyn oo uu ka buuxo shaah uu dhadhankiisa hubo, suuqyada magaaladana uu la wareego.
Xasan oo ah mataanka Xuseen ayaa ka warramay sidii loo la yaabay walaalkii markii isaga oo qurbaha ka yimid uu magaalada Hargeysa shaah la wareegay, balse markii dambe loo bogay. Taasi waxa ay markii dambe dhalisay in shaqaale cusub la qoro, magaaladana lagu faafiyo.
Khayre Ibraahin oo soo bartay cilmiga loo yaqaanno “Electronic Commerce” ayaa arkay baahida loo qabo in ay shirkaduhu yeeshaan astaan iyo magac u diiwaan gashan oo u gaar ah. Taasi waxa ay ku dhalisay in uu sameeyo shirkadda Brandkii oo ka caawisa in shirkaddu ama ururku uu yeesho astaan aan u ekayn boqollaalka kale ee isku wada eg. Loo diiwaan geliyo, si fududna ugu noqoto baadisooc.
Caweyskan oo ahaa mid roob weyni ka da’ayey magaalada ayaa haddana ahaa mid aanu roobku celin dhallinyartii ka soo qayb galaysay si ay wax uga korodhsadaan, iyaga oo dharkoodu qoyan yahayna ay su’aalo aan dhammaad lahayn weydiinayeen.